Ziyini Izinkumbulo Zakho Zezingcingo Zomphakathi? -Izindaba-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co, Ltd.
Ziyini Izinkumbulo Zakho Ngocingo Lomphakathi?
Isikhathi: 2020-12-02 Hits: 23
Ngenkathi omakhalekhukhwini bengathandwa, izingcingo zomphakathi zaba yindlela yokukhetha kubantu abaningi ukuxhumana nomndeni, abangani ngisho nabathandi. Ochungechungeni lwakuqala lwe-TV, imibhangqwana ibuye yakhuluma ngokukhathazeka kwabo ezindlini zocingo zomphakathi. Lokhu kungabonakala enkathini ye-2G ne-3G. Mhlawumbe emehlweni ezinsizwa eziningi ezingama-2000s, izingcingo zomphakathi namakhadi we-IC yizinto ezingajwayelekile ezingezwakala.
Ucingo luyinto yokuxhumana yomphakathi eyethulwe ivela phesheya ekuqaleni kweminyaka yama-1990. Ngemuva kokufaka ikhadi le-IC, ungashaya, okuxazulule ubunzima bezinkinga zabantu abaningi ngaleso sikhathi; ikakhulukazi ekhampasi, ekhadini le-IC, Ikhadi lasekhempasini kwake kwaba yinto ekumele ube nayo kubafundi. Imigqa emide yokushaya izingcingo enxanxatheleni yezitolo noma ezindlini zocingo zomphakathi kwakuyindawo eyingqayizivele ngaleso sikhathi.
Lapho ucingo lomphakathi lwalufana nomkhuba omusha. Faka izinhlamvu zemali ezimbalwa, noma ufake ikhadi elincanyana lefoni, bese ufaka inombolo. Akunandaba noma ngabe bahlukene kangakanani laba bantu ababili, ungezwa izwi lomunye nomunye ngokushesha ngomuntu owemukelayo; manje emisebenzini eminingi yamafilimu neyethelevishini, Idokodo lezingcingo zomphakathi liseyisiphakamiso esibalulekile sokuveza ezothando nokulangazelela.
Ngesikhathi lapho izingcingo zasendlini zazingathandwa, izingcingo zomphakathi zaxazulula ukuphuthuma kwabantu abaningi futhi zasindisa izimpilo eziningi.
Ukuthandwa komakhalekhukhwini kulethe ukucindezelwa kwezingcingo zomphakathi. Manje, ngisho nasendaweni echumile, ukuhamba izindawo ezintathu noma ezinhlanu, kunzima ukuthola ucingo lomphakathi.
Eqinisweni, izingcingo zomphakathi zingashayela izinombolo eziphuthumayo u-110, 119, 120 no-122 mahhala. Kulezi zinsuku, izingcingo zomphakathi ziya ngokuya ziphenduka "izingcingo eziphuthumayo", okuyizingqalasizinda zamadolobha futhi ezibaluleke kakhulu emphakathini wanamuhla osugugile.
Sekuyiminyaka engaphezu kwekhulu, izingcingo zomphakathi zihlale zihambisana nedolobha ngalinye nezimpilo zabantu; idlulise injabulo yabantu, izinsizi, usizi, futhi yabona izinguquko zaleli khulu leminyaka. Eminyakeni yamuva nje, ucingo lomphakathi lubonakala selufiphele emkhakheni wokubona wabantu, kepha inhloso yalo yomlando ayikapheli. Ngemuva kokubeka kabusha imisebenzi yayo yebhizinisi, izoqhubeka nokuphelezela abantu ukwamukela ikusasa elingcono.
I-Xianglong inikeza izesekeli zocingo ezahlukahlukene nezinsizakalo ezihlukile kumakhasimende. Ngentuthuko yeminyaka engu-15, singakwazi ukwenza ngezifiso ama-handset ahlukahlukene angajwayelekile, amakhiphedi nezindawo zokulala zamakhasimende ngokushesha. Ukuthatha ukuhlinzeka ngama-keypads ezimboni nawezempi athembekile, futhi izingcingo eziphathwayo is umsebenzi wethu wenkampani, sigxila ekubeni ngumholi womhlaba wonke kukhiphedi yezimboni nakumahendisethi ezokuxhumana ngocingo!
Okwedlule: I-Xianglong Metal IP65 Keypad Isetshenziswa Ku-Gate Fence Access Control
Okulandelayo: Zakhiwa Nini Futhi Kuphi Izingcingo Eziphuthumayo Eziseceleni Komgwaqo Ezithuthukisiwe?